१६० आरोही मनास्लु हिमाल चढ्ने « Nepal Page
काठमाडौँ, २२ भदौ । शरद् ऋतुका याममा मनास्लु हिमाल (८,१६३ मी.) आरोहणका लागि आकर्षण देखिएको छ । पर्यटन विभागले १६ आरोही समूहका १६० जनालाई अनुमति दिएको छ । सोमबारसम्म कञ्‍चनजङ्‍घा हिमाल ९८,५८६ मी. आरोहण गर्न एक समूहले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ । दुबै हिमालबाट हाल सम्म रु ३१ लाख ४६ हजार सलामी दस्तुर सङ्कलन भएको छ ।